♥မောင်ပြန်လာမယ့်အချိန်……..♥ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ♥မောင်ပြန်လာမယ့်အချိန်……..♥
Posted by bluerose on Feb 28, 2012 in Copy/Paste | 19 comments
ရင်ထဲကအကြိမ်ပေါင်းများစွာခေါ်နေမိတဲ့ မောင် ဆိုတဲ့နှလုံးသားလေးတခုက
blue rose has written4post in this Website..
View all posts by bluerose →
ရင်ထဲကပွင့်ထွက်လာတဲ့ စာစုလေးတွေပါလားနော်………. နှင်းဆီပြာလေးရယ်……… ရင်ထဲမှာလေ ကလိကလိနဲ့ တအိအိ ရှိုက်သံများနဲ့အတူ အားပေးသွားပါတယ်နော်………
နုထှာ ကွယ် ….
သများ တို့ လက်များ … အဲ့လို နုချင်လို့ နုမရဘူး …
ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှောင်ဘွဲ့ခံမယ့် လူတွေ မလာခင် ..
လက်မထောင်ပြီး အားပေးသွားပါတယ် ချင့်….
အလိုလိုမှ သများ အသည်းက ခိုင်ပါဘူး ဆိုနေမှ …
အဟင့် … ရွှတ် … ရွှတ် ..
သူ့စာဖတ်ပြီး အခု ငိုနေရပီ သိရားလို့ ….
ကျနော်လည်း အားပေးသွားပါတယ် ခင်ဗျာ ..
အယ် … သားကို သကြားလုံး (ချိုချဉ်) လာကျွေးနေဒယ် ..
မေမေက မှာထားတယ် ..၊ ကိုရင် ကိုရင် အပျိုမြင် ချိုချဉ် မစုပ်ရ .. တဲ့ …။
အဲဒါကြောင့် သကြားလုံးတော့ စားတော့ဘူး …
ပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ အတိတ်ကိုတွေးပြီး … မဆွေးငေးနေနဲ့ …… အချိန်တွေ ဖြုန်းရာရောက်ပါတယ် ။
ပုံသေတွက်ချက်လို့မရတဲ့ အနာဂတ်ကိုမျှော်ပြီး …. စိတ်ကူးမယဉ်နဲ့ …… စိတ်မောလွန်းလှပါတယ် … ။
လက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ နေ့ရက်ကိုသာ … အကောင်းဆုံး ဖြတ်ကျော်ဖို့ ကြိုးစားပါ … ဘလူးရို့စ်ရေ … ။
အချိန်က ကုစားပေးမှာပါ …. နောင်ဆယ်နှစ် အနှစ်နှစ်ဆယ်ကြာတဲ့အခါ .. ဒီအချိန်ခံစားရတာက .. ရယ်စရာတောင် ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပါ .. မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလျှင် … ဆက်ပြီး တမ်းတမနေပါနဲ့တော့လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် … ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညှင်းပမ်းခြင်း တစ်မျိုးလို့ မြင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ … ။
မဖြစ်နိုင်တာကို တောင့်တနေတဲ့အချိန်မှာ …. ဖြစ်နိုင်တာတွေကို မမြင်လိုက်သလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ် … ။
ကိုယ်နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အချစ်တစ်ခု .. တစ်နေ့နေ့ပိုင်ဆိုင်လာမှာပါ .. ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀လည်း ထပ်တူကျပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ဘလူးရို့စ်ရေ… ။
မမ etone ရေ ကျေးဇူးပါခုလိုဆုံးမတဲ့အတွက်ပေါ့
နှင်းဆီပြာလေး အလွမ်းထဲမှာ နစ်မနေနဲ့တော့ ဘ၀ကို ပျော်ပျော်ရွင်ရွင် ဖြစ်အောင် နေကြည့်ပါ။
ပိုပြီး နေရတာ အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။
ရင်ခွင်တံခါးကို လွှာ့ အတွက်အမြဲဖွင့်ထားပါတယ် လွှာရယ်……
အဟီး …. စတာနော် စိတ်မဆိုးရဘူး (ဆိုးလည်း ဂရုမစိုက်ပါဘူး)
အားပေး ဖတ်ရှုသွားပါတယ် နှင်းဆီပြာရေ။
ဝေဒနာ နည်းနည်း ပေါ့သွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီသီချင်းကိုပဲ ထပ်ကိုးကားလိုက်ဦးမယ်။ (ခွင့်ပြုပါ ကိုထီးရေ)
သေခြင်းမှာ လူဟာ တစ်ခါသာ သေရ၏
ချစ်ခြင်းမှာ လူဟာ အခါခါ သေရ၏ တဲ့။
အခါခါ ချစ်လို့ ရပါတယ် ဗျာ။
အခါခါ အသည်းကွဲတတ်တာလေးလည်း သတိပြုပါ ဒေါ်နှင်းဆီပြာ…။
bluerose ရေခံစားရတယ်… တို့ကအဲလိုအရေးအသားတွေကိုကြိုက်တယ်… လွှာရဲ့မောင်လည်းလွှာနဲ့ပေါင်းရပါစေ ခံစားချက်ခြင်းတူလို့ တို့လည်း မမျှော်လင်သင့်တဲ့ တို့ရဲ့မောင်ကို မျှော် နေမိတယ် မောင့်ကြောင့်လည်း အိပ်ရေးတွေပျက် အလုပ်တွေပျက်ရပါတယ်…. လွှာမောင်နဲ့တို့မောင် တူရင်တောင် မောင်က ပို မှောင်ပါတယ်….(စတာနော်)အဟိ ဟီ
နှင်းဆီပြာရေ အလွမ်းတွေထဲက မြန်မြန်နိုးထနိုင်ပါစေနော် …
အလွမ်းတွေကို အချိန်က ကုစားပေးသွားမှာပါ
ဒီကြားထဲ ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်ပြီး ကိုယ်ကလည်းချစ်နိုင်မယ့်သူနဲ့ ဆုံတွေ့နိုင်ပါသေးတယ် ……….
~~~ မောင်လာချိန်ရောက် ရင်ဖြင့် မျှော်မျှော်သူ မှိုင်ငေ.. လို့.. ဆွေးလည်းဆွေးခဲ့ ဖူးပြီလေ… မှေးမရ စက်မပျော် တနေ့သော် ပေါ်လာနိုးနဲ လက်ချိုးကာရည်….. အအိပ်အနေ ပျက်ပြားတာလည်း များ..များလှပါပြီလေ……..
နွေမိုးဆောင်းတွေ..ဟောင်းကြွေကာလည်း ပြောင်းခဲ့ပြီ..မေ့မှာတစ်ယောက်တည်း ကြိတ်ခါ ငိုဆဲကွယ်.. မောင်ပြောကြားခဲ့တာများ ယုံတမ်းစကားတွေပါမောင်ရယ်.. သိတော့သိသားပဲလေလေ..ဒါပေမဲ့ တခါတလေ စိတ်ထွေပြား.. တကယ်လား အဟုတ်လားလို့များ ထင်မှားမိတုန်းပဲလေ…. ~~~~
အားပေးသွားတယ်ဗျို့.. နှင်းဆီပြာလေး အတွက် နီနီဝင်းရွှေ သီချင်းလေး ဆိုပေးလိုက်တယ်နော်…
မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာသေချာရင် မမျှော်လင့်တာအကောင်းဆုံးပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့
ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာနေသလိုပါပဲအဲဒါက တက်နိုင်သလောက်မေ့တော့မယ်ဆိုရင် သူနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးကို အကုန်လုံးနီးပါး ပြန်သတိမရအောင်ထိန်းနိုင်မှပါ……
အကောင်းဆုံးသမားတော်ကတော့ အချိန်ပါ အချိန်ကကုစားသွားမှာပါ….
မောင်ပေ ၊ မေပေါင်
မောင်ပေ = ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် သွားလိုက်ပါပြီ ခင်ဗျ ။